Inkastoo laga badiyay kooxdiisa Man United Zlatan Ibrahimovic oo dhigay RIKOODH naadir ah oo aan ebid horey loo dhigin – Gool FM
Inkastoo laga badiyay kooxdiisa Man United Zlatan Ibrahimovic oo dhigay RIKOODH naadir ah oo aan ebid horey loo dhigin
(Manchester) 10 Sebt 2016. Zlatan Ibrahimovic ayaa dhigay taariikh naadir ka ah kubbada cagta kaddib goolkii uu dhaliyay ciyaartii dhaweyd ee Derby Manchester.
Inkastoo ay Manchester United guul darro kala kulantay kooxda ay sida wayn u coltamaan ee Man City misane Ibrahimovic wuxuu heystaa sabab uu ku dabaal dego.
Goolka uu Ibra dhaliyay kulankii dhawaa ee 2-1 looga adkaaday Red Devils ayaa ah kulan kale oo Derby ah uu gool ka dhaliyo joog dheeraha reer Sweden.
34-jirka ayaa ah laacibkii ugu horreeyay taariikhda oo 7-kulan oo kulamada Derby-ga Yurub goolal ka kala dhaliyay.
Ibarhimovic ayaa gool ka dhaliyay Derby Manchester uu markii ugu horreysay uu maanta ciyaaray, waxaa ugu horreeyay El Clasico ee Barcelona iyo Real Madrid, Milan Derby ee Inter iyo AC Milan oo uu labadaba u soo saftay.
Derby D’Italia-na wuu ka dhaliyay goolal ee dhex mara Inter Milan iyo Ajex, intaa oo kaliya ma ahanee wuxuu kaloo goolal ka soo dhaliyay kulamada derbiga ee Ajax iyo Feyenoord ee De Klassieker iyo kulanka PSG iyo Marseille ee loo yaqaano Le Classique.
EPL: Santi Cazorla oo Arsenal ka caawiyay guul dirqi ah oo ay ka gaartay Southampton +SAWIRRO
GOOGOOSKA: Real Madrid vs Osasuna 5-1 (Ronie oo goolkiisii fasalkan dhaliyey)